Kurema Kurema Kwevashandi veWiricheya - Kurasikirwa nehuremu Uchiri MuWheelchair
Kurasikirwa nehuremu Paunenge uri muA hwiricheya
Vazhinji vedu tinosangana nedambudziko rekudya macalorie akawanda kupfuura atinoda, uye chikamu chakanyanya kuita ndechekuti isu tinowanzorega kurovedza muviri mushure mekuita kudaro. Paunoita izvi zvinoteedzana iwe unotanga kukura uremu, uye pasi pemutsara, kufutisa.
Vanopfuura mamirioni makumi manomwe vanhu vari muUnited States parizvino vari kusangana nematambudziko ehuremu, uye kugogodza pamusuwo, kufutisa. Vanenge mamirioni makumi matanhatu nematanhatu vakuru vakanyanya kufutisa, inova nhamba inotyisa inoramba ichikwira gore rega rega.
Njodzi dzehuremu Kuwana pane A hwiricheya
Kana iwe uri mumwe munhu ari pa hwiricheya kwenguva yakareba yenguva zuva nezuva, ipapo iwe uri panjodzi yekukudziridza huremu. Izvi dzimwe nguva ndezvechokwadi nekuti vanhu vanoshandisa mavhiripu kashoma kuti vashandise mhasuru dzemakumbo avo uye saka mhedzisiro ishoma simba rinoshandiswa.
Mashoma Makorori Kuburikidza Nepanyama Chiitiko
Kuitira kudzivirira kuneta kubva mukukura mumunhu, kudya kwakanaka kwakakosha, asi kurovedza muviri kwakaringana kwakakoshawo kana zvasvika pakudzivirira kufutisa pane hwiricheya. Kunyanya kufutisa kana kunyanyisa kufefetera kunogona kukuisa padanho repamusoro remhando dzakawanda dzezvirwere, zvinosanganisira chirwere chemwoyo nedzimwe mhando dzekenza.
Kuti utarise chinzvimbo chako pari zvino mumakwikwi ekuti “ndakakora zvakadii,” unogona kushandisa Body Mass Index kuyera kuti munhu ari pahuremu hwezita rake here. Kugona kuchengetedza kurasikirwa kwehuremu iwe unofanirwa kugadzira maitiro anoenderana neupenyu hwako hwezuva nezuva, kuwana nguva muzuva kuti ugone kurovedza muviri zuva nezuva. Imwe nzira yekugadzira uremu ndeyekuwana kudya kwakaringana kuitira kuti iwe ugone kuronga yerefu-kwenguva refu uremu zano.
Kuva Nechikafu Chakanaka Uchiri hwiricheya-bound
Kunyanyisa kudya kunogona zvakare kuve nyaya kana kuyedza kuchengeta kudya kunovaka muviri; iwe unofanirwa kuedza kudzikisa chikamu chemazana ezvikafu zvako kudzivirira kunyanya kudya. Iwe unogona kugara uchidzidza maitiro ekudzora huremu pane a hwiricheya asi zvinonyanya kukosha kuva nehanya mushure mekudzidza kudzikisa huremu.
Zvinorehwa zvinoreva kuti haungozviita kwevhiki imwe chete, asi unofanira kuwana basa rekuita pamwe nekurarama kwenguva refu, kana paine zviyero zvekudya uye kurovedza muviri zvinokushandira, namatira nazvo kusvikira iwe uchida kuchinja zano.
Njodzi Yehuremu Kuwana Mune A hwiricheya
Kurera huremu kwakaringana kana iwe usingashandise hwiricheya, asi kana iwe ukawedzera a hwiricheya kune iyo equation; zvinoreva mikana shoma yekudzora huremu uye kushandisa simba kupisa makorori. Kunyangwe zvakadaro, zvakakosha kwazvo kune hwiricheya vashandisi kutarisira kudya kwavo uye kurovedza muviri kudzivirira kuwedzera uremu.
hwiricheya vashandisi vanogona kudzivirira kuwedzera uremu nekuita ma cardio maekisesaji anoenderana nehurwere hwavo kana kuremara. Simba rekudzidzira kurovedza muviri rinogona zvakare kushandiswa kusimudzira hutano hwakanaka, izvi zvinogona kusanganisira kushandisa zviyereso kana imwewo mhando yekudzivirira mudziyo kuvaka mapfupa uye mhasuru.
Simba rekurovedza muviri rinogona zvakare kubatsira iwe kunatsiridza muyero wako; izvi zvaizobatsira a hwiricheya mushandisi panguva ye chinja kana kunzvenga zvipingamupinyi pasina kudonha pachigaro.
Mitambo Yakagadzirirwa hwiricheya Users
Imwe nzira iwe yaunogona kuyedza kudzikisa huremu uye kuti ugare wakakwana sezvinobvira, kutamba mitambo. Mitambo yakadai se hwiricheya basketball, netball, kana kunyanyisa hwiricheya mitambo inogona kuva mhinduro kune yako kufutisa uye kuwedzera huremu matambudziko.
Pamwe ndiyo nzira iri pachena yekugara muchimiro pane hwiricheya kuzvisimudzira kana kuzvimanikidza kuenda kwauri kuenda (pazvinogoneka). Iyi sarudzo inoenderana nemamiriro ako azvino, kana usingakwanise kuzvisimudzira, dzimwe sarudzo dziri kunze uko kuti dzikubatsire kugara uri muchimiro uye kudzivirira matambudziko ehutano senge chirwere chemwoyo.
Tsvaga Wiremu Wiricheya Wakareruka